Nesorin'ny Air China ny serivisy Pyongyang noho ny "asa fandraharahana tsy mahafa-po"
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nesorin'ny Air China ny serivisy Pyongyang noho ny “asa fandraharahana tsy mahafa-po”
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Nesorin'ny Air China ny serivisy Pyongyang noho ny “asa fandraharahana tsy mahafa-po”
Novambra 21, 2017
Niala nanidina nankany Korea Avaratra ny Air China noho ny tsy fahampian'ny fangatahan'ny mpandeha.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Air China an'i Beijing dia namarana ny sidina nankany amin'ny renivohitr'i Korea Avaratra Pyongyang, noho ny tsy fisian'ny fangatahan'ny mpandeha.
Ny sidina dia "nampiato vonjimaika noho ny asa tsy mahafa-po," hoy ny mpiasan'ny Air China.
Ny fampiatoana dia midika fa ny Air Koryo any Korea Avaratra no hany kaompaniam-pitaterana mampitohy ny firenena amin'i Sina. Ny tranokalany dia mitanisa sidina mankany Beijing, Shanghai, Shenyang, ary Dandong any Sina ary Vladivostok any Russia.
Tamin'ny volana aprily, nilaza ny Air China fa manapaka ny faharetan'ny sidina mankany amin'ny mpifanila vodirindrina aminy izy. Nanolotra serivisy charter ho an'ny firenena ny kaompaniam-pitaterana sinoa sasany, saingy nesorina ihany koa ireo.
Ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny sinoa, Lu Kang, dia nilaza fa tsy manana vaovao momba ny vaovao izy, fa ny fanapaha-kevitra tahaka izany dia horaisina amin'ny "toetran'ny asa sy ny tsena," hoy izy.
Ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana dia niara-nametraka sazy vaovao ho an'i Korea Avaratra. Nilaza i China fa hampihatra azy ireo izany.
Araka ny tatitry ny Reuters, hatramin'ny faran'ny volana oktobra dia nanapaka betsaka ny fanafarana arina sy firaka ary vy avy any avaratra i Shina, izay manandanja indrindra amin'ny toekarenan'i Pyongyang.
Nihena 84 isan-jato ny fanafarana firaka, ny firotsahan'ny vy dia nilatsaka 98 isan-jato, ary ny importa arintany dia nidina 71.6 isan-jato tamin'ny taona lasa.
Nijanona tamin'ny fivarotana lasantsy sy diesel tany Korea Avaratra ihany koa i Shina tamin'ny faran'ny volana Jona noho ny olana mety tsy fandoavan'ny firenena ny entana. Mbola manan-kery ny fameperana.
Ny angon-drakitra tamin'ny volana oktobra dia nampiseho ny varotra teo amin'ny toekarena faharoa lehibe indrindra manerantany ary ny mpifanila vodirindrina aminy dia 412 tapitrisa dolara, ny ambany indrindra hatramin'ny aprily.